I-Boutique Style Villa ne-Spa. Imizuzu emihlanu ukuya Enkabeni Yedolobha. - I-Airbnb
I-Boutique Style Villa ne-Spa. Imizuzu emihlanu ukuya Enkabeni Yedolobha.
Isimanga, iphenduke i-villa yekhulu leminyaka ibe sesimweni sesimanje ngokuphelele ngekhulu lama-21. Ukuhambahamba imizuzu emibili kuphela ukuya e-Ponsonby Rd - ikhaya lama-boutique okuklama kanye nezindawo zokudlela ezihamba phambili ze-NL. Pheka ekhishini lokuklama ngaphambi kokuya egcekeni eligqugquzelwe yi-Bali nengadi eshisayo. Hlala futhi uthamele izinkathazo zakho endaweni yokubhukuda ye-spa ejulile elalela ingoma yezinyoni zomdabu.
* Imizuzu emihlanu kuphela ngemoto ukuya enkabeni yedolobha
nesiteshi sesikebhe * Ibhishi eliseduze ledolobha liqhele ngemizuzu emihlanu
* Izinhlobonhlobo ezinhle zamathilomu endawo, izitolo zokuklama kanye nezindawo zokudlela emnyango wakho
* Umklamo wangaphakathi ohlelwe kahle
Isimanga, iphenduke i-villa yekhulu leminyaka ibe sesimweni sesimanje ngokuphelele ngekhulu lama-21. Ukuhambahamba imizuzu emibili kuphela ukuya e-Ponsonby Rd - ikhaya lama-boutique okuklama kanye nezindawo zokudlela ezihamba phambili ze-NL. Pheka ekhishini lokuklama ngaphambi kokuya egcekeni eligqugquzelwe yi-Bali nengadi eshisayo. Hlala futhi uthamele izinkathazo zakho endaweni yokubhukuda ye-spa ejulile elalela in…
“Kia Ora futhi wamukelekile! Uma uwazisa amahhotela e-boutique uzothanda ikhaya lethu.”
– Paul, umbungazi wakho
Igumbi lokugeza elihlangene nelokulala, Umatilasi oyi-Pillow-top, Umbhede omkhulu, Umnakekeli wezimoto omayo, Umshini womoya oqandisayo
4.95 (izibuyekezo ezingu-20)
I-Ponsonby - Zitholele le ndawo eyi-hip & eyinkimbinkimbi, wazi ngamakhefi ayo e-chic, amabha, izindawo zokudlela, imfashini yomklami ehlukile, izinto zasekhaya ezimakethe, ubucwebe bekhwalithi ephezulu, izisetshenziswa nezimakethe ezikhethekile. Bheka ubuciko bendawo, imisebenzi yezandla namagalari. Ukuhamba nje imizuzu eyi-10, noma uhambo olude usuka enkabeni yedolobha, amakhaya akhona ayingxube ephilayo yezindlu zamagugu ezibuyiselwe kanye namagugu esimanje ezakhiwo. Uma kuhwalala, dlala bukhoma igigi yomculo noma udanse kuze kube sebusuku kakhulu njengoba o-DJ abaphezulu bezungeza amadekhi abo.
Ibanga ukusuka e- Auckland Airport